Ndebanye aha ahia Mark - Ndị na-eme nde
Ndebanye aha mba ụwa na inye aka na mba 119
Ọtụtụ mba otu ngwa mba dị iche iche
Otu ngwa na otu ugwo iji tinye maka nchebe na mba 119.
Na-azọpụta oge na ego.
Gụnyere ndị otu na-anọchite anya ihe karịrị 80% nke azụmaahịa ụwa.
Jikwaa ma mee ka akara gị dị ọhụrụ site na otu sistemụ.
Gịnị Ka Anyị Rịọ a Quote
Nchọpụta Azụmaahịa efu na mba 119 na ikike. You nwere ike iji aha Ahịamaahịa, Aha Ọchọ ma ọ bụ Nọmba.
Oma ahia ohuru
Gbochie kagbuo ụghalaahịa gị edenyere aha gị, na-enwe oge ụfọdụ na-emezigharị ahia ụghalaahịa gị oge ụfọdụ.
Ọrụ anyị na-enye gị ohere ịchọpụta ngwa ahịa (s) na ọkwa mbipụta, ọzọ maka ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikike ma ọ bụ nke enyere iji hụ na nchebe nke ụghalaahịa gị.
Ọrụ mbufe ahia anyị na enyere gi aka ikenye ma nyefee ahia ahia ahia ma obu onye ozo.
Anyị na-enyere gị aka ịme mmegide nke na-eme ka ihe ga-aga nke ọma gaa n’ihu, yana mmemme ndị ọzọ ọ bụrụ na achọrọ maka nchedo nke ụghalaahịa gị.
Number nke klaasị1234567891011121314
Office nke sitereAF AfghanistanAG Antigua na BarbudaAL AlbaniaNA AustriaAU ỌstreliaAZ AZAZARABA Bosnia na HerzegovinaBG BulgariaBH BahrainBN Brunei DarussalamBQ Bonaire, Sint Eustatius na SabaBT BhutanBW BotswanaBX BeneluxN ’BelarusCH SwitzerlandCN ChinaColombialọ ọrụ ColombiaCU KubaCW CuraçaoCY SaịprọsCZ Czech RepublicMba GermanyDK DenmarkDZ AlgeriaMba EstoniaEG IjiptEM nke European UnionES SpainFI nke FinlandFR FranceGB United KingdomGE GeorgiaGH GhanaGM GambiyaGR GrisKR CroatiaHU HungaryNJ IndonesiaBU IrelandIL IsraelNA IndiaIR Islamic Republic nke IranB Ice IcelandỌ B Italy ItalyJP JapanKE KenyaKG KegịstanKH KambodiaKP Democratic Ndị mmadụ Republic of KoreaKR Republic nke KoreaKZ KazakhstanLA Lao Ndị Democratic RepublicLI LtenchtensteinLR LiberiaLS LesothoLT LithuaniaLV LatviaMA MoroccoMc MonacoMD Republic nke MoldovaME MontenegroMG MadagascarMK Onye bụbu Yugoslav Republic of MacedoniaMN MongoliaMW MalawiMX MexicoMZ MozambiqueNA NamibiaOB NorwayGH Norway NorwayNZ New ZealandOA African Intellectual Property Organisation (OAPI)OM OmanPH PhilippinesPL PolandPT PọtugalRO RomaniaRS SerbiaRU RussiaRW RwandaSD SudanG SwedenỌ SwedenNG SingaporeMba SloveniaSK SlovakiaSL Sierra LeoneSM San MarinoST Sao Tome na PrincipeSX Sint Maarten (akụkụ Dutch)SY Syria Arab RepublicSZ EswatiniNke ThailandTJ TajikistanTM TurkmenistanTN TunisiaTR TurkeyUA UkraineUnited States United States nke AmericaUZ UzbekistanVN Vietnam NamZM ZambiaZW Zimbabwe
Akara mkpokọ, akara asambodo, ma ọ bụ akara nkwa
Akaramaahịa nwere ike ịbụ akara, agwa, ma ọ bụ ahịrịokwu na-enyere mmadụ aka ịmata ọdịiche nke otu ngwaahịa na ibe. ihe njirimara nke ụlọ ọrụ ejirila ụwa niile ma ọ bụ n'otu obodo. Ihe atụ kachasị ama bụ Apple, nke apụl na-anọchi anya ya. Akara a enweghị ederede ọ bụla mana onyonyo ahụ n'onwe ya bụ njirimara isi nke Apple.
Ihe Nlereanya Ọzọ Ike: Ihe akara McDonalds bu ‘M’ ọla edo nke ndi mmadu n’agba nka kariri site na oge di anya, ya bu, 1955.
Ọzọkwa, n'ọtụtụ ọnọdụ, akara azụmaahịa / ọrụ nwekwara ike ịgụnye agba, egwu na isi. Dịka ọmụmaatụ, Coke bụ akara amaara nke ọma na njirimara ya na-acha ọbara ọbara na ọcha.
Kedu ihe ndị a ga - eme iji debanye aha edenyere azụmaahịa?
Registerdebanye aha edenyere azụmaahịa bụ usoro dị ogologo ma chọọ ọtụtụ ejujuju, dabere na mba ebe etinyere akara / ụghalaahịa maka ndebanye aha, anyị na ndị nde Milị kere kewara usoro ahụ ụzọ atọ dị mkpa:
Nzọụkwụ 1 - Ọmụmụ ụghalaahịa
N'oge ọmụmụ ụghalaahịa ọ bụla, anyị na-eme nyocha nke ọma iji hụ na e meghị aha ụghalaahịa yiri nke ahụ (ma ọ bụ ụdị ụghalaahịa ọ bụla yiri ya) ugbu a. A na-eme nyocha iji hụ na ndebanye aha edepụtara pụrụ iche iji nweta akara ụghalaahịa. A na-enwekarị ọmụmụ ihe zuru oke nke onye ọka iwu nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-akwadebe akụkọ zuru oke banyere ohere ịmebanye aha na-aga nke ọma yana ndụmọdụ ya.
Kwụ na Requzọ nke abụọ - Arịrịọ ndebanye aha ahia
Arịrịọ Ndebanye aha Trademark gụnyere nkwadebe na nzacha nke ngwa ụghalaahịa site n'aka onye ọka iwu nwere ọgụgụ isi. Onye nyocha site na Trademark Office na-enyocha ngwa ma na-atụ aro ka ngwa gaa n'ihu usoro mbipụta, ma ọ bụ onye na-enyocha ya nwekwara ike jụ ozi dị na ngwa ahụ. Incase, onye nyocha anyị na-etinye aka na ngwa ahụ, a ga-agwa gị ozugbo ma kọwaara gị maka ịmekwu nke ọma, ka ịga n'ihu, ozigbo ahia ahia bidoro na usoro nke ọzọ, a na-ebipụta ọkwa ọha na eze nke ahia ahụ ihe dị ka ọnwa atọ iji nye ndị ọzọ. ezigbo ohere iji kpachaara anya megide usoro ndebanye aha. Ozugbo oge mbipụta gafere ma kwụsịchaa mmegide niile, a na-anabata ndenye aha ụghalaahịa.
Nzọụkwụ 3 - Asambodo Ndebanye aha
Nzọụkwụ a dịgasị iche iche site n'otu mba gaa n'ọzọ. Ọ bụghị mba niile na-akwụ ụgwọ maka asambodo ozugbo anabatara ngwa ahụ mana imirikiti mba na-akwụ ụgwọ ego gọọmentị maka inye akwụkwọ ikike. Ozugbo akwụgasịrị ụgwọ ahụ, a ga-ebunye gị gọọmentị nyere Asambodo edenye aha edetu ma edenye aha edenyere n'akwụkwọ ndekọ aha dị ka edebanyere aha ya, na-enye ikike nweere onye nwe akara ahia iji akara ejiri mara akara ahia ahụ.
Nde Ndi n’ere site na nmekorita nke mba anyi na ndi otu ndi okacha amara nke ndi CFA, ndi nwere akuko, ndi otu ndi ego, ndi otu ndi oka iwu, ndi n’ile ndi mmadu n’ego na ndi ahia mba ofesi na aru oru n’iru ndi ahia nke ikwuputara ha. mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi oke ọrụ anyị, ọmịiko na ọnụahịa asọmpi.
Anyị na-enye ọrụ akaụntụ na / ma ọ bụ nyochaa njikwa ụlọ ọrụ azụmahịa mba ofesi etinyere na ikike ndị ae kwuru n'okpuru:
Bonaire, Sint Eustatius na Saba
Alakụba nke Iran
Republic nke Korea
Ndi Democratic Republic of Lao
Republic nke Moldova
Nke bụbu Yugoslav Republic of Macedonia
Organisation Ngwongwo ihe ọgụgụ isi nke Africa (OAPI)
Sint Maarten (Dutch akụkụ)
Siria Arab Republic
Ọ bụrụ na ị na-ele anya maka Ọrụ Akaụntụ na Ọrụ Nyocha na obodo ọ bụla, nke edeghị na weebụsaịtị anyị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo site na ozi-e
info@millionmakers.com ma ọ bụ oku na-aga Obodo Ọstrịa +43720883676, Armenia + 37495992288, Canada + 16479456704, Poland + 48226022326, UK +442033184026, USA +19299992153
Ngwa ndị mba ofesi na-achịkwa nanị site na nkwekọrịta ahụ.
A ga-akwụ ụgwọ ndị na-esote a ma kpuchie afọ 10:
Basic ego (Nkeji edemede 8 (2) (a) nke Agreement)
Ebe omumu akara a adighi acha
ebe omumu ọ bụla nke akara ahụ na-acha
Mgbakwunye maka klas nke ngwaahịa na ọrụ karịrị klas atọ (Nkeji edemede 8 (2) (b) nke Agreement ahụ)
Ego agbakwunyere maka aha nke mba nkwekọrịta ọ bụla a họpụtara (Nkeji edemede 8 (2) (c) nke nkwekọrịta ahụ)
Ngwa ndị mba ofesi na-achịkwa naanị maka Protocol
Gwọ ego (edemede 8 (2) (i) nke Protocol)
Ego agbakwunyere maka klaasị na ọrụ ọ bụla gafere klaasị atọ (Nkeji edemede 8 (2) (ii) nke Protocol), belụsọ ma ọ bụrụ naanị ndị nkwekọrịta na-akwụ ụgwọ maka ụgwọ onye ọ bụla (lee 2.4, n'okpuru) ka akwụpụtara (lee edemede 8 (7) (a) (i) nke Protocol)
Ego agbakwunyere maka nhọpụta nke ndị otu nkwekọrịta ọ bụla a họpụtara (Nkeji edemede 8 (2) (iii) nke Protocol), belụsọ ma ọ bụrụ na ndị ahọpụtara akpọrọ nkwekọrịta bụ ndị nkwekọrịta na-akwụ ụgwọ maka ego akwụ ụgwọ onye ọ bụla (lee 2.4 n'okpuru) Nkeji edemede 8 (7) (a) (ii) nke Protocol)
Ego a kwụrụ ụgwọ maka ịhọpụta ngalaba nkwekọrịta ọ bụla edepụtara maka ụgwọ maka ego nke onye (kama itinye ego maka mgbakwunye) (belụsọ edemede 8 (7) (a) nke Protocol)) ewezuga ebe akpọrọ nkwekọrịta onye ọ bụla bụ nkwekọrịta steeti. (nwekwara) site na Nkwekọrịta na oflọ Ọrụ sitere na ya bụ oflọ Ọrụ nke Nchịkwa (nke ọzọ) site na Nkwekọrịta (na nkwanye maka atù na-emekọ ihe ọnụ, a na-akwụ ụgwọ ihe mgbakwunye): a na-akwụ ụgwọ ego nke onwe onye ọ bụla Ndị na-asọrịta mpi banyere ya
Ngwa ntanetịime na nkwekọrịta yana Protocol
A ga-akwụ ụgwọ ndị a ga - ekpuchi afọ 10
Ego mgbakwunye maka klas nke ngwa ahịa na ọrụ ọ bụla gafere klas atọ
3.3 ego mgbakwunye maka ịhọpụta ngalaba nkwekọrịta ọ bụla edepụtara maka ego anaghị akwụ ụgwọ otu onye (lee 3.4, n'okpuru)
Onwe ego maka aha onye obula banyere nkwekorita nkwekorita obula banyere nke ikwesiri ikwu ugwo ya (lee edemede 8 (7) (a)) nke Protocol, ewezuga ebe ndi otu nkwekorita haputara bu nkwekorita nke steeti (kwa) na oflọ Ọrụ sitere na ya bụ thelọ Ọrụ steeti (nke ọzọ) site na Nkwekọrịta (na nkwanye maka ndị na - enwe nkwekọrịta, a na - akwụ ụgwọ ego ụgwọ ọrụ): ego nke onye ọ bụla na - arụ bụ nke ọ bụla so na - arụ ọrụ.
Emegaghị emezi gbasara nhazi ngwa ahịa na ọrụ
A ga-akwụ ụgwọ ndị a (Iwu 12 (1) (b)):
Ebe a na-ejikọghị ngwongwo na ọrụ ya na klaasị
Ebe nhazi, dị ka ọ na-apụta na ngwa ahụ, otu ma ọ bụ karịa okwu ezighi ezi ma ọ bụrụ na, ebe ngụkọta ego n'okpuru ihe a gbasara ngwa mba ụwa erughị 150 Switzerland franc, a gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla.
Mpempe akwụkwọ na-esote ndenye aha mba ụwa
A ga-akwụ ụgwọ ndị na-esote, ọ ga - ekpuchi oge n'etiti ụbọchị ahụ dị mma nke ntinye aha ahụ na njedebe nke oge aha ọhụrụ ahụ n'oge a.
Ego mgbakwunye maka otu nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla edepụtara gosipụtara n'otu arịrịọ ebe ego anaghị akwụ ụgwọ iji kwanyere ndị otu a akpọrọ aha (lee 5.3, n'okpuru)
Ego a kwụrụ ụgwọ maka ịhọpụta ngalaba nkwekọrịta ọ bụla edepụtara maka ụgwọ maka ego nke onye (kama itinye ego maka mgbakwunye) (ewepụ Nkeji 8 (7) (a) nke Protocol)) ewezuga ebe akpọrọ nkwekọrịta onye ọ bụla bụ nkwekọrịta steeti. (nwekwara) site na Nkwekọrịta na oflọ Ọrụ na - ahụ maka Ndị Ọrụ na - ahụ Maka Ọchịchị bụ Ọfịs nke Ala na - ejidekwa ya (na - akwanyere ndị ahụ na - ahụ maka ọrụ nkwekọrịta ụgwọ na - akwụ ụgwọ ego). isgwọ na-edozi ego site na Ndị otu na - arụ ọrụ
Ego mgbakwunye, belụsọ ma ọ bụrụ na emee mmegharị ahụ ọ bụ naanị maka ngalaba nkwekọrịta edepụtara maka ịkwụ ụgwọ onye ọ bụla na-akwụ ụgwọ (lee 6.4, n'okpuru)
Ego mgbakwunye maka otu nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla edepụtara maka ịkwụghị ụgwọ otu onye (lee 6.4, n'okpuru)
Charkwafu ụgwọ maka oge amara
Ndekọ nke iche
Nbufe zuru oke nke ndebanye aha mba ofesi
Nyefee akụkụ (maka ụfọdụ ngwongwo na ọrụ ma ọ bụ maka ụfọdụ nkwekọrịta nkwekọrịta) nke ndebanye aha na mba ụwa
Mkpesa nke onye na - ejide ya na - esote aha ndebanye aha nke mba ọzọ chọrọ ka enyere ya mee ihe, ọ bụrụ na mmachi ahụ na - emetụta ihe karịrị otu Usoro nkwekọrịta, ọ bụ otu ihe niile
Gbanwee n’aha na / ma obu adres nke onye na-ejide ya na / ma ọ bụ ebe ebe onye na-ejide ya bụ ihe iwu kwadoro, iwebata ma ọ bụ mgbanwe na ngosipụta gbasara ụdị iwu nke njide na States na, ebe enwere ike, ngalaba mpaghara n'ime nke ahụ Steeti n'okpuru iwu nke ngalaba ahaziri ahazi ahazila maka otu ma ọ bụ karịa aha ụwa niile maka otu ndekọ ma ọ bụ mgbanwe n'otu ndekọ ahụ chọrọ.
Ndekọ nke ikikere n'ihe banyere ndebanye aha ụwa ma ọ bụ mmezigharị ndekọ nke akwụkwọ ikike
Rịọ maka njikwa n'ihu n'okpuru Iwu 5bis (1)
Ozi gbasara ndebanye aha mba ụwa
Abtọpụta akwụkwọ nkwenye siri ike na Ndenye aha International nke mejupụtara nyocha nke ọnọdụ aha ndebanye aha na mba ụwa (wepụtara zuru ezu peeji atọ), maka ibe ọ bụla mgbe nke atọ gachara.
Abtọpụta akwụkwọ mmetụtara enyere esighi na International Register nke nwere nnomi mbipụta akwụkwọ niile, na ozi niile nke ọjụjụ, emebere site na ndebanye aha mba ofesi (wepụtara dị mfe), rue peeji atọ, maka ibe ọ bụla mgbe nke atọ gachara.
Otu ịgba akaebe ma ọ bụ ozi ederede, maka otu ndebanye aha na mba ụwa, maka ndebanye aha mba ụwa ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ otu ozi ahụ na otu arịrịọ.
Mbipụta ma ọ bụ foto nke mbipụta nke ndebanye aha mba ụwa, n'otu ibe
Ewere ụlọ ọrụ nke International ikike ịnakọta ego, nke ọ ga-edozi n'onwe ya, ka aga-arụ ọrụ ngwa ngwa yana ọrụ ndị Usoro Ego a na-adịghị ekpuchi.
Maka akwụkwọ mba ofesi na-arịọ arịrịọ maka ndị na-arịọ akwụkwọ, onye obodo ha bụ obodo a na-akpọ Least Development, na ndepụta nke United Nations guzobere, a na -ebelata ụgwọ ego bụ 10% nke ego enyere (agakọ ọnụ ọgụgụ kacha nso nso). N'ọnọdụ dị otú a, ego dị mkpa ga-adị 65 Swiss francs (ebe enweghị mwepụta nke akara ahụ na agba) ma ọ bụ 90 Switzerland franc (ebe mmịpụta ọ bụla akara a na agba).
Ego nkwụghachi ụgwọ ọ bụrụ na ndị ọchịchị jụrụ ajụjụ Ahia
Onweghị ebe ụwa, ndị ọchịchị Trademark na-akwụghachi ụgwọ, ma ọ bụrụ na ha jụrụ akwụkwọ ndebanye aha edenyere azụmaahịa. Costgwọ nke arịrịọ ndebanye anyị gụnyere ego ndị ọrụ iji nyefee ngwa ahụ maka Trademark Office (s), yana ụgwọ iwu maka nyocha, ịkwadebe na ịgbaso ngwa gị. Ndị a enweghị nkwụghachi.